Samsung Galaxy S7 Edge, famakafakana video | Androidsis
Samsung Galaxy S7 Edge, famakafakana video
Omaly Samsung nanidina ny tratrany nandritra ny famelabelaran-kevitra izay voalahatra ho an'ny omaly 21 febroary tamin'ny 19:00 hariva, ary nanehoany an'izao tontolo izao ny andiany voalohany: ny Samsung Galaxy S7 ary ny Samsung Galaxy S7 Edge. Fantsona roa misy famolavolana mitovy amin'ny an'ny teo alohany ary tonga miaraka amina fikasana mazava: hamerina ny tsena very an'i Samsung.
Androany, rehefa avy naneho anao ny fiheverako voalohany taorian'ny fitsapana ny Samsung Galaxy S7 ary ny Samsung Gear 360, anjaran'ny modely miaraka amin'ny efijery miolaka roa. Aza adino ny voalohany fahatsapana horonantsary an'nyl Samsung Galaxy S7 Edge!
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Samsung Galaxy S7 Edge
Araka ny efa nampoizina dia nisafidy ihany i Samsung tamin'ny farany hampihatra ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ny sainam-pirenena vaovao. Amin'izany fomba izany, ny Samsung Galaxy S7 Edge dia manana efijery de 5.6 santimetatra izay mahatratra ny vahaolana 2560 x 1440 teboka (QHD) ankoatry ny processeur tsara indrindra eny an-tsena: ny Qualcomm Snapdragon 820 mahery, SoC miorina valo izay miaraka amin'ny Adreno 530 GPU -na dia ahafahantsika mankafy atiny multimedia na lalao video tsy misy olana.
Ankoatr'izay, ny Samsung Galaxy S7 Edge dia manana fahatsiarovana 4 GB RAM karazana LPDDR4, izay manome antoka fa ny fahamendrehan'ity fitaovana ity izay ho tonga miaraka amin'ny Android 6.0 M eo ambanin'ny sosona CustomWiz an'ny mpanamboatra. Rehefa avy nanandrana azy vetivety dia mazava ny fehin-kevitra voalohany nataoko. Ara-teknika, ny Samsung Galaxy S7 Edge dia telefaona finday lehibe sy ny zava-misy amin'ny fampiharana slot micro SD card, ho fanampin'ny fanamarinana IP68 izay manome ny fanoherana ny Samsung Galaxy S7 Edge amin'ny vovoka sy rano, dia fanatsarana tena mahaliana raha ampitahaina amin'ny ho an'ny teo alohany.
Saingy manana izany tsipika fitohizana izany izy. Betsaka ny olona no ho diso fanantenana mahita fa ny Samsung Galaxy S7 Edge dia mitovy amin'ny endriny raha oharina amin'ny teo alohany. Mihevitra ny zava-misy ve ianao ny Samsung Galaxy S7 Edge dia mitovy amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge Hanenjika anao amin'ny resaka varotra ve izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S7 Edge, famakafakana video
Huawei Mate 8, fahatsapana voalohany tao amin'ny MWC
Samsung Gear 360, ity no fakantsary fakantsary 360º vaovao an'ny Samsung